Dadaalo lagu xalinayo xiisada u dhexeeysa Galmudug iyo Ahlusunna oo socda iyo ciidamada Huwanta oo u soo Ruqaansaday Guriceel. | Weheliye Online
Home Wararka Dadaalo lagu xalinayo xiisada u dhexeeysa Galmudug iyo Ahlusunna oo socda iyo...
Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dhaq-dhaqaaqyo nabadeed oo lagu doonayo in si nabada gacanta dawladda loogu soo celiyo maamulka magaalada Guriceel uu halkaasi ka socdo.
Dhawr Xildhibaan oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo xubno ka tirsan maamulkii magaalada Guriceel ee Galmudug ayaa u dhaqaaqay dhinaca magaalada, si ay ula kulmaan saraakiisha Ahlu-Sunna ee Jimcihii qabsatay, uguna qanciyaan inay si nabada maamulka magaalada ugu soo wareejiyaan maamulka Galmudug.
Xildhibaannada waan waanta wada oo gaaraya illaa shan ayaa markoodii hore ka soo galay maamulka Galmudug dhinaca wadaaddada Ahlusunna, waxayna ka codsadeen maamulka Galmudug in iyaga laga war sugo oo waqti la siiyo si xal nabadeed loogu helo xiisadda ka taagan Guriceel.
Previous articleDEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo laba garab u kala jabay & Dagaalka Ahlu suna oo Khilaaf Abuuray..
Next articleMaxey madaxda Galmudug u diideen iney wadahadal la galaan kooxda Ahlu Sunna?